Ny evan'ny Alahasaty
Ny Alahasaty no vintana fahadimy amin'ny fanandroana manaraka ny zodiaka. Ny Asorotany no eo alohany ary ny Asombola no manaraka azy.
2 Ny antokon-kintana Alahasaty sy ny zodiaka
Avy amin'ny anaran'antokon-kintan'ny zodiaka amin'ny teny arabo hoe اأسد / Al-Asad ("liona") ny hoe Alahasaty. Amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia atao hoe Alahasady koa io teny io.
Manondro ny antokon-kintana atao amin'ny teny latina sy anglisy hoe Leo na amin'ny teny frantsay hoe Lion ny hoe Alahasaty. Amin'ny fiteny soahily dia atao hoe Asadi na Simba io antokon-kintana io. Amin'ny teny maley dia atao hoe Asad na Singa ihany koa izy.
Ny antokon-kintana Alahasaty sy ny zodiaka[hanova | hanova ny fango]
Ny fotoana andalovan'ny masoandro eo amin'ny antokon-kintan'ny Alahasaty dia manomboka amin'ny 10 Aogositra ka miafara amin'ny 16 Septambra. Ny fari-potoan'ny Alahasaty araka ny zodiakan-kintana dia hatramin'ny 16 Aogositra ka hatramin'ny 15 Septambra. Ny Alahasaty ao amin'ny zodiakam-panandroana mahazatra (zodiaka mikisaka; frantsay: zodiaque tropical) dia manomboka amin'ny 23 Jolay ka miafara amin'ny 22 Septambra. Ny fanandroana malagasy dia tsy mifanaraka amin'ireo noho izy miandry tsinam-bolana.
Asorotany Alahasaty Asombola
Ao amin'ny fanandroana malagasy[hanova | hanova ny fango]
Ao amin'ny fanandroana malagasy dia vintana fahadimy koa ny Alahasaty ka ny tapany atsinanana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Zanabintana ny Alahasaty. Araka ny finoan-drazana malagasy dia vinta-mpamosavy sy andron'ody ny Alahasaty. Mifandratra amin'ny Adalo sy miarina eo amin' ny Adijady ny vintana Alahasaty.
Misy amin'ny Malagasy ny mandray ny volana Alahasaty ho volana fahadimy amin'ny taona ao amin'ny tetiandro malagasy (raha ny Alahamady no ataony volana voalohany).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Alahasaty&oldid=997514"
Voaova farany tamin'ny 6 Oktobra 2020 amin'ny 05:27 ity pejy ity.